Kyaw Zay Ya » Archives » 2012 » May
Kyaw Zay Ya Random Of My Life Monthly Archives: May 2012	May 27th, 2012
0 လန်ဒန် ညရှုခင်း ဟိုတစ်နေ့က ကိုဖိုးချမ်း၊ ကိုသားလတ် တို့နဲ့ လန်ဒန် ညနေခင်းကို ဓါတ်ပုံ ထွက်ရိုက်ဖြစ်တယ်။ သူတို့နဲ့သွားရတာ အလွန်အကျိုးရှိပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ ပညာတိုးတာပေါ့.။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုင်တဲ့ ကင်မရာကလည်း သုံးယောက်လုံး အတူတူပဲ ဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပုံတွေကြည့်လိုက် ဘယ်လိုရိုက်တာလဲ မေးလိုက်နဲ့ အဲဒီ့အထဲမှာ ကျနော့် ပုံတွေက အဆိုးဆုံးပါပဲ။ သည်းခံပြီးတော့သာ ကြည့်ကြပါဗျာ။
Long exposure ကို စမ်းကြည့်ထားပါတယ်။ ကျနော့် Blog hosting limited ဖြစ်တဲ့အတွက် quality ကို လျော့ချထားရပါတယ်။
ရိုက်တုန်းက sport light တွေဝင်နေပါတယ်။ Photoshop မှာ အနည်းငယ် ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။
blue rainbow လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ပေါ့ဗျာ။ စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ နာမည်ပေးလိုက်တာပါ။
Tweet This Post Photography London , London night , Photography May 22nd, 2012
Tweet This Post Uncategorized May 18th, 2012
0 ညီညွှတ်ခြင်း နှင်းဆီ အငြိမ့် (London) မြန်မာပြည် အလွမ်းပြေ အငြိမ့် ကြည့်ကြမလား??? ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း ဦးဆောင်ပြီး နေတိုး၊ ကျော်ကျော်ဗို၊ ထွန်းထွန်း၊ မိုးမိုး၊ ရဲလေး၊ မိုးယုစံ၊ ဂျင်းနီ၊ တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်း တို့ ပါဝင် ဖျော်ဖြေမည့် ညီညွှတ်ခြင်း နှင်းဆီ အငြိမ့် လန်ဒန်မှာ 08-07-2012 (တနင်္ဂနွေ) နေ့ကျရင် ကမှာနော်။ လက်မှတ်ကို အဲဒီ့နေ့ကျမှ ၀ယ်ရင် 25 ပေါင်၊ ကြိုဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ 22 ပေါင်တဲ့၊ လိပ်စာကတော့.. Greengord Town Hall, Ruislip Road, (Junction with Oldfield Lane South), Greenford, Middlesex, London, UB6 9QN. ဖြစ်ပြီး။ ညနေ 5:00 နာရီကနေ 10:00 နာရီအထိ ကပြအသုံးတော် ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်မှတ် ၀ယ်ဖို့ ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်..။
သာသနာ့ရံသီ – 02082050221
ကိုထွန်းလင်း – 07946707691
စောရန် – 07805032453
မနီလာ – 07723344933
ဇာနည်ကိုကို – 07576607122
ငယ်ငယ် – 07908815880 တို့ထံမှာ ဆက်သွယ် စုံစမ်း မေးမြန်း ၀ယ်ယူနိုင်ကြပါပြီ။ Tweet This Post ညီညွှတ်ခြင်း နှင်းဆီ အငြိမ့် May 14th, 2012
Tweet This Post Uncategorized IC London Tour 2012 , Iron Corss , London May 12th, 2012
0 A collection of my HDR photos HDR (high Definition Range) Tutorial တွေကို ကြည့်ပြီး ဖန်တီးချင်လာတာနဲ့ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးကြည့်ပါတယ်။ သိပ်အကောင်းကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေ့ ကျနော်လဲ HDR Tutorial တွေကို မြန်မာလို ဖန်တီးကြည့်ပါဦးမယ်။
Tweet This Post Uncategorized Older Entries May 2012